खेल संसारमा धेरै उपयोगी र कुशल खोज एक भएको छ प्रेस लागि प्रशिक्षक Ab रकेट, वजन को लागि अभिप्रेरित र सिद्ध आकार मापदण्डहरू हासिल छ जो। यो सिम्युलेटर लोकतान्त्रिक, कार्यक्षमता र प्रयोग मा सजिलो एक embodiment छ। यो घर मा आंकडा सुधार को लागि एक उत्कृष्ट विकल्प छ।
प्रेस सिम्युलेटर Ab रकेट (AB रकेट), अतिरिक्त सेन्टिमिटर को छुटकारा गर्न चाहने सबैलाई मदत गर्नेछ। पछाडि मा कम्पन पैड धन्यवाद उपकरण मात्र होइन मालिश कार्य, तर पनि समारोह कायम गर्न। यसको कार्य एक बरु प्रभावकारी र कुशल प्रशिक्षण आधारित छ, एक घुमा र rocking अभ्यास implies। को संख्या मा यस प्रकारको सरल manipulations धन्यवाद प्रेस तपाईंको घन हुनेछ, र शरीर एक स्वादिष्ट र फिट हुनेछ।
प्रेस Ab रकेट गर्न सिम्युलेटर जो, मांसपेशी प्रशिक्षण को डिग्री आधारमा इच्छित परिणाम दिन हुनेछ तीन प्रतिरोध स्तर, छ।
प्रयोगकर्ताहरूको लागि लाभ
सुन्दर प्रशिक्षण बिल्कुल सबै मांसपेशी समूहहरु, को abdominals।
महत्वपूर्ण उत्तरार्द्ध कम, को कमर मा परिवर्तन।
सामान्य मा परिवर्तनको तथ्याङ्कले।
मालिश कार्य सम्पूर्ण शरीर र शरीर केही भागहरु असर छ।
कम लागत समयमा तत्काल परिणाम उपस्थिति।
सिम्युलेटर को विशिष्टताको
, कुनै पनि प्रयोगकर्ताको लागि उपयुक्त छ जो आफ्नो शारीरिक क्षमता र सक्षमता आधारमा तीन-टियर लोड उपस्थिति।
कार्य को बहुमुखी।
अविश्वसनीय टिकाउ स्टेनलेस स्टील बाडे Ab रकेट को स्थायित्व सकारात्मक प्रभाव छ।
यस पुस्तिका कार्यक्षमता विस्तार र सञ्चालन मा वर्णन जो प्रेस, लागि सिम्युलेटर अविश्वसनीय प्रयोगमा सरल छ।
कम्पैक्ट आकार र कम वजन उत्पादनहरु तपाईं पनि आफ्नो सानो अपार्टमेन्ट मा भण्डारण गर्न अनुमति दिन्छ।
सरल तह संयन्त्र सिम्युलेटर एक कोठरी मा वा ओछ्यानमा अन्तर्गत भण्डारणको लागि परिवर्तन गर्न अनुमति दिन्छ।
प्रयोग र उत्पादन को सरल मर्मतका को सुख।
आधार सेटमा Ab रकेट थिच्नुहोस् सिम्युलेटर निम्न घटक समावेश:
विस्तृत निर्देशनहरू लागि, जो उत्पादन सबै डिजाइन सुविधाहरू, सञ्चालन, कार्य र सुविधाहरू यसको सिद्धान्त बाहिर सेट गर्छ। उत्तरार्द्ध अंग्रेजी र रूसी भाषाको व्याख्या दुवै छ।
परिवहन समयमा पूरा फारममा सुरक्षा उत्पादन लागि नरम भागहरु संग दफ्ती।
शरीर गर्न लोड को आवश्यक स्तर प्रदान उत्पादनहरु तीन एकाइहरूको निर्वाचकगण, सिलेंडर को सेट गर्नुहोस्।
उत्पादन प्याकेजिङ्ग निम्न मापदण्डहरु छ - देख्न 65x36,5x20।
प्रयोगकर्ता को अधिकतम वजन 110 किलो भन्दा बढी हुँदैन।
सिम्युलेटर को सकल वजन जो यो ओसारपसार गर्न र पनि सबै भन्दा नाजुक महिलाले घर हस्तान्तरण गर्न सम्भव बनाउँछ मात्र 8 किलो छ।
फ्रेम खियाले र जंग को उपस्थिति समावेश जो एक ठोस धातु उत्पादन व्याख्या विशेष व्यवहार गरेको छ, जो गरिएको र संरचना चित्रित, छ।
शीर्ष तकिया लागि नियमन संयन्त्र।
कसरी सिम्युलेटर गर्छ र यसको zest के हो?
सञ्चालनको यसको सिद्धान्त द्वारा प्रमाणित प्रेस सिम्युलेटर Ab रकेट ट्विस्टर, प्रयोग गर्न धेरै सजिलो छ। तपाईं बस, यसलाई बस्न फिर्ता झुकाव र मांसपेशीमा आराम गर्न आवश्यक छ। काम गर्न तल प्राप्त गर्न, प्रयोगकर्ता सिम्युलेटर प्रतिरोध प्रणाली को सहायता हुनेछ। यो लोड र तयारी बिना सबैलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध हुनेछ। त्यसैले प्रभाव अनुहार मा हुनेछ यसलाई प्रयोग गरेर कुनै पनि दिशा मा आन्दोलनहरु प्रदर्शन र शरीर झुकाव पर्याप्त सरल छ।
सही सञ्चालनको मामला मा, सबैलाई अनावश्यक वजन हटाउनेछ र आफ्नो पेट मांसपेशीमा निराश र पेट राम्रो राहत प्राप्त हुनेछ। सिम्युलेटर प्रयोग खेल गतिविधिहरु अर्थ नयाँ प्राप्त हुनेछ। कारण धेरै सहज र नरम पैड गर्न थकान महसुस गर्दैन एक खेलाडी प्रशिक्षण महिनामा फिर्ता र घाँटी को क्षेत्र मा अवस्थित छ।
Exerciser Ab Ab रकेट उत्कृष्ट गुणवत्ता, विश्वसनीयता र अविश्वसनीय अविश्वसनीय कार्यक्षमता को clearest उदाहरण हो। साथै, उत्पादन कुनै पनि वित्तीय मौका धेरै किफायती छ। सिम्युलेटर लागत21993400 rubles देखि फरक हुन्छ।
Ab रकेट थिच्नुहोस् सिम्युलेटर: ग्राहक समीक्षा
खरीदारों को सामान्यिकृत राय अनुसार, यो लोकप्रिय व्यायाम मिसिन कार्यात्मक र प्रभावकारी हुन्छ। यसमा कक्षाहरू धेरै प्रयास आवश्यकता छैन। सिम्युलेटर रक प्रेस कारण आफ्नो पछाडि तनाव को कम स्तरमा, भुइँमा भन्दा धेरै सुविधाजनक छ। नियमित प्रशिक्षण पेट को एक महिना स्मार्ट उपस्थिति हुन्छ पछि, मांसपेशीमा को रूपरेखा, को भुँडी देखि बोसो बाहिर एकदम परिवर्तन गर्न साथै थाल्छन्।
सिम्युलेटर को ठूलो फाइदा कार्य र अतिसंवेदनशीलता संग सामना गर्न मानिसहरूलाई शरीर को यो भाग मदत गर्छ जो घाँटी, समर्थन, र यो भेला हुनु र सञ्चालन गर्न धेरै सजिलो छ।
सकारात्मक पक्षहरू बाहेक केही प्रयोगकर्ताहरू रिपोर्ट र यो सिम्युलेटर को बुरा छ। बीचमा उत्तरार्द्ध यो नाङ्गो आँखा देख्न जो एक लापरवाह विधानसभा, बोक्नु उचित छ। उत्पादन कमजोरीहरू र कमजोरी कक्षाहरू अप्रिय creaking काम गर्न एक महिना सुरु कि पानीका मुहानहरू छन्। नकारात्मक र अक्सर तत्काल र फट प्रतिस्थापन आवश्यक जो तल उत्पादन, मा disposed कम गुणस्तर प्लास्टिक पाङ्ग्रा समावेश गर्नुपर्छ।
ग्याँस कारतूस "तरवार": विवरण, विनिर्देशों र समीक्षा
घर को लागि चरण मिसिन: के मांसपेशी समूहहरु काम?
शब्द "Moveton" र अन्य अनप्रोलर उधारो को अर्थ
Keranove ( "Keranov"), स्याम्पु: संरचना, निर्देशन, समीक्षा
Zhirinovsky, को चुनाव र पुरातन शक्ति
वृद्धि स्वतन्त्रता लागि बाह्य ब्याट्री
नयाँ वर्षको लागि ट्राउट व्यञ्जन। छुट्टी व्यञ्जनहरु